Maneran-tany 35 905 no maty, mafy ny ady any eoropa
Mitombo hatrany ny isa, izay manaporofo hatrany hatrany fa areti-mandringana ny coronavirus. Mahatratra 35 905 ny maty maneran-tany, ka ny 26 078 dia tany Eoropa avokoa. 740 000 ny olona voa maneran-tany, ka 408 203 dia any Eoropa avokoa. Any Etazonia sy Canada 150 000 izay manome 2635 ny maty any amin’ireo, 106 609 no voa any Azia ary 3827 ny isan’ny maty.
Mitoka-monina miaraka amina vehivavy 20
Raha toa ka napetraka any ThaÏlande ny hamehana noho ny coronavirus efa namono olona 7 sy namindra tamin’olona 1500, dia nifindra lasy mitoka-monina any Allemangne ny Mpanjaka Rama X, izay Maha Vajiralongkorn moa no tena anarany. Nalainy ho azy manokana hotely raitra iray lehibe ao amin’ny Station de ski de Garmisch-Partenkirchen any Bavière, ary misy vehivavy 20 miaraka aminy ao. Misy misitery hafahafa ao anatin’izao fitokana-monina izao, na eo aza ny vadin’ity mpanjaka ity, dia ny mpanjakavavy Suthida izany .
150 ny fitambaran’ireo maty hatreto
Azo ambara ho tsy tena lasibatra ny Kaontinanta Afrikanina mitaha amin’ny Eoropa sy Etazonia ao anatin’ny Kaontinata Amerikanina. Hatramin’ny omaly dia 150 ny fitambaran’ireo rehetra maty taty Afrika. Miisa 4800 ny olona voa hatramin’izao. Ahiana anefa ny hipariahan’ny tsimok’aretina amin’ity herinandro ity, raha ny vinavinan’ny mpandinika. Ny toe-tany mafana izay tsy dia mety amin’ny coronavirus no heverina fa antony tsy hisian’ny maty betsaka aty Afrika.
Sahirana ny frantsay
Nihoatra ny 3000 ny maty
Nilaza ny governemanta Frantsay omaly fa 418 no maty teo anelanelan’ny alahady sy omaly alatsinainy, manome ny isa ho 3024. Mahatratra 21 000 ny olona nampidirina hopitaly, ka 5000 ao amin’ny sampana fameloman’aina. Ny Region-Ile-de-France sy ny Grand-Est no tena voa mafy. Nambaran’ny Tale jeneralin’ny fahasalamana Frantsay Jérôme Salomon fa ny 34% amin’ireo ao amin’ny fameloman’aina dia latsaky ny 60 taona. 59% eo anelanelan’ny 60 hatramin’ny 80 taona, ary miisa 64 ireo olona latsaky ny 30 taona. 20 000 fitiliana isan’andro ny fitiliana ho vita amin’ny faran’ny herinandro, raha ny nambaran’io tompon’andraikitra io. I Frantsa dia nanafatra tampim-bava 100 000 any ho any avy any Chine.
Ahiana ho tonga hatrany amin’ny 200 000 no ho faty
Mihoatra ny 2000 ny maty any Etazonia amin’izao fotoana izao. Ity firenena ity no betsaka olona voa indrindra eto ambonin’ny tany ankehitriny. Manahy mafy ny olona akaiky ny Filoha Amerikanina Donald Trump, fa ho tafiakatra 100 000 hatramin’ny 200 000 no faty mandra-piafaran’ity areti-mandripaka ity. Manakaiky ny 150 000 ireo olona voa any Etazonia amin’izao fotoana izao.
812 indray no maty tao anatin’ny 24 ora
Toa zary tsy vaovao intsony ny fandrenesana olona an-jatony maro maty isan’andro any Italia. Mbola lavitry ny kitay ny afo amin’ny hahafehezana ny Coronavirus. 812 no maty tao anatin’ny 24 ora monja, izay manome ny isa rehetra ho 11500. Na izany aza dia mba efa somary nisy fihenana ny taham-pitomboan’ireo voa izay 4% teo ho eo satria 8,3% izany efatra andro lasa izay, ary avo efatra tamin’izany tany amin’ny 15 andro lasa.
Ahiana ho ripaka ny afrikanina
Volabe 3000 miliara dolara no ilaina hifehezana an’io hoy ny sekretera Jeneralin’ny Firenena Mikambana na ny ONU, Antonio Guterres. Raha nolazaintsika fa 150 no maty aty Afrika dia nambarany fa manahy ny hisian’ny fahafatesan’olona an-tapitrisany ity Tompon’andraikitra voalohan’ny ONU ity. Isan’ny adihevitra ihany koa amin’izao fotoana izao ny hoe: aty Afrika no hanaovana andrana voalohany amin’ny vaksiny. Any Eoropa anefa no tena be marary sy be maty ankehitriny